Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Senegalese Idrissa Gueye Nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Football nke kacha mara amara "Gueye". Ụmụ anyị Idrissa Gueye Akụkọ nke a na-eme ka ị ghara ịkọ akụkọ zuru oke site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, mmalite ezinụlọ ya na ndabere ya, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ amachaghị gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọ nwere ịpị ndị na-emegide ya na ụzọ mgbochi. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Idrissa Gueye nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Chenk Tosun Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Idrissa Gueye Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, Idrissa Gueye mụrụ na 26th nke September 1989 na Dakar na Senegal. A mụrụ ya nne ya, bụ Marie Gueye na nna nke a na-amaghị nke ọma.
Mba nke Senegal nke agbụrụ ndị nwere agbụrụ na-eto eto n'Africa zụlitere n'ebe a mụrụ ya na Dakar tinyere ụmụnne abụọ ndị toro eto bụ ndị a na-amachaghị banyere ya, ma ọ ka amatabeghị ụmụnne.
N'ịbụ ndị na-etolite n'okporo ámá ndị na-asọ oyi na Dakar, Young Gueye nwere ịhụnanya na-enweghị atụ maka football. N'ihi ya, ọ na-eme ngwa ngwa iji nweta ihe ndị dị na nchịkọta nri iji soro ndị ọgbọ ya maka bọl n'okporo ámá.
Idrissa Gueye malitere site n'ịgba bọl na n'okporo ámá dị uzuzu uzuzu nke Dakar.
Mgbe ha nọ na ya, Gueye na ndị enyi ya na -agba ụkwụ efu n'okporo ụzọ ájá ma na -ejikarị obere okwute eme ntọala.
Onye na -anụ ọkụ n'obi n'egwuregwu bọọlụ ga -egwu ogologo ụbọchị niile ruo mgbe ụkwụ ya malitere ịgba ọbara. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga -ala ezumike nká n'ụlọ wee hie ụra na bọl n'akụkụ ya.
Idrissa Gueye Nwatakiri Ihe omuma - Nkuzi na Ulo oru:
Ka oge Gueye bụ 14 agadi, ọ na-ekele ndị enyi ya na-agba bọl na Dakar dị ka ezinụlọ ya si kwaga n'obodo Saly nke na-eme ka ndị agha Ụlọ akwụkwọ ọzụzụ Diambars.
N'ịbụ onye na-etinye aka na ohere iji mee ka football ya gbasaa n'ọzọ ọzọ, Gueye debara aha na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ Diambars ebe ọ nọrọ ọtụtụ afọ n'ịmụta na iji nkà zuru okè nke e ji mara ụdị egwuregwu ọ dị ugbu a.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Idrissa Gueye debara aha na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ Diambars mgbe ọ dị ihe dị ka afọ iri na anọ.
Ndị Gueye mechara hụ Gueye site na Lille n'afọ nke ise ya na Diambars (2008) wee weta Ligue 1 n'akụkụ ebe ọ gbagoro n'ọkwá ma banye n'ime ndị otu egwuregwu klọb n'oge oge 2010-2011.
Idrissa Gueye chọtara Lille n'afọ nke ise ya na Diambars (2008).
Idrissa Gueye Biography - Ndụ Mmalite Ndụ na Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe Gueye na otu ndị Lille, Gueye nyeere aka na French merie Ligue 1 aha n'oge 2010-2011 oge na-aga n'ihu na-aghọ onye na-amalite mgbe niile na njikọ nakwa na UEFA Champions League.
Afọ anọ ka e mesịrị, Gueye nwetara nkwaga na Aston Villa nke Bekee na 10th nke July 2015.
Ọ jisiri ike chọta ụgbụ otu ugboro tupu klọb ahụ abanye na ọdịda, mmepe nke gosipụtara akara ngosi mbụ nke ọrụ Gueye.
Idrissa Gueye Bio - Rise To Fame Akụkọ nke:
N'ịbụ onye na-eme ka a kwụsị nkwekọrịta ya na Villa ahụ a tọhapụrụ, Gueye bịanyere aka na Everton na 2nd nke August 2016 ruo afọ anọ ma soro ya na-emekọ ihe n'oge oge 2016-17.
Jordan Pickford Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Ọ bụ mgbe Everton na Gueye dere na ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ngwongwo na ihe ọ bụla maka egwuregwu ọ bụla n'ofe egwuregwu ise dị na Europe nakwa na ọ bụ onye mbụ egwu iji merie 100 tackles na Europes n'elu ise lụrụ n'oge 2016-2017 oge. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Idrissa Gueye Mmekọrịta Ndụ Eziokwu:
Gueye lụrụ di na nwunye n'oge ederede. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara akụkọ gbasara nwoke na nwoke na nwoke na nwanyị. Iji malite, Gueye adịghị ama na ọ ghaghị ịlụ nwanyị ọ bụla tupu ya ezute enyi nwanyị ya na nwunye ya, bụ Pauline.
Idrissa Gueye na nwunye ya Pauline.
Ọ bụ ezie na amaghị obere banyere otú ịhụnanya hụrụ, ha na-enwekọ obi ụtọ na-eme ka alụmdi na nwunye ha doo site na mụọ nwa nwoke a na-akpọ Aịzik. O nwere ike ọ gaghị adịte aka tupu di na nwunye ahụ nabatara nwa nwoke ọzọ ma ọ bụ nwa nwanyị.
Foto nke Idrissa Gueye na nwunye Pauline na nwa nwoke Isaac.
Idrissa Gueye Ndụ Ezinụlọ:
Idrissa Gueye si n'agbata ezinụlọ dị n'etiti. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya na-amalite na nne na nna ya.
Banyere nne Idrissa Gueye: Marie Gueye bụ aha nne onye agbachitere. Ọ bụ nne na-ahụ n'anya ma na-akwado nkwado nke lekọtara Gueye nke ọma site n'okporo ámá ya na-agba bọlbụ na ndụ ya ruo mgbe ọ hapụrụ Lille. Marie bụkwa nne nke ụmụnne Gueye nke tọrọ na ụmụnne ya ndị obere.
Gylfi Sigurdsson Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
Banyere nna Idrissa Gueye: A mụrụ Gueye nye nna nke amachaghị banyere ya. A na-enye nna na-egwu bọl na-amakarị maka akpali mmasị Gueye na football site na ịzụta onye na-agbachitere bọọlụ mgbe ọ bụ nwata.
Banyere ụmụnne nwanne Idrissa Gueye: Gueye nwere ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị bụ ndị a na-amaghị banyere ịzọpụta maka eziokwu ahụ bụ na ụmụnne ya ndị nwoke abụọ tọrọ ya na-agba bọl ọkachamara ma ha enweghi ọganihu dị ka Gueye.
David Moyes Child Story Story na ihe omuma
Idrissa Gueye ya na ndi ezinulo ya amaghi.
Banyere ndị ikwu Idrissa Gueye: N'ebe ezinụlọ Gueye si dị, amachaghị banyere nna nna ya na nne nne ya yana nne na nna nna ya.
N'otu aka ahụ, onye na -agbachitere nwere nwanne nna, nwanne nne, ụmụ nwanne nna na ụmụ nwanne nwanyị amabeghị na akụkọ nwata ya na ihe ndị ama ama nke ndụ ya ruo taa.
Idrissa Gueye Ndụ Nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Idrissa Gueye akara?. Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke omume Gueye iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, onye Gueye bụ ngwakọta nke àgwà Libra Zodiac.
Ọ na -elekwasị anya, na -anụ ọkụ n'obi, na -arụsi ọrụ ike ma na -ekpughekarị ozi gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Banyere ọdịmma ya na ihe omume ntụrụndụ ya, Gueye nwere mmasị iso ndị enyi na ezinụlọ nọrịa, ile ihe nkiri, gee egwu na ịgba egwu.
Idrissa Gueye Web Life Eziokwu:
A na-enyocha ọnụ ahịa Idrissa Gueye. Otú ọ dị, ọ nwere uru ahịa nke € 20,00 nde. Isi mmalite nke akụ na ụba ya sitere na mbọ bọọlụ ya ebe nyocha nke ụgwọ ọnwa ya na mmefu ihe ngosi gosipụtara na ọ na-ebi ndu ndụ mgbanwe.
N'ihi ya, ntakịrị ihe a maara banyere ezi ọnụ ụlọ ya, ebe ọ bụ na a ga-ejidechapụ ihe osise ụgbọala ya zuru ezu dị ka a hụrụ ya mgbe ọ bụla ọ na-ebuga ụgbọ ala Mercedes ọcha.
Idrissa Gueye Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akwụkwọ akụkọ Idrissa Gueye nke nwata, nke a bụ ihe amachaghị ma ọ bụ nke amachaghị nke a na-anaghị etinyekarị na akụkọ ndụ ya.
Idrissa Gueye bụ otu n'ime ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ kpọrọ asị.
Ọ dịghị mgbe ọ hụrụ na ọ dịghị aṅụ ọ bụla e nyere ya ka ịṅụ sịga.
Banyere okpukpe ya, Gueye bụ onye Alakụba na onye na-eme ya na nke ahụ.
Idrissa Gueye bụ onye Alakụba.
E jikọtara Gueye na ịkwaga klọb dị ka PSG na Manchester United n'oge ederede.
Idrissa Gueye Biography Eziokwu - Nchịkọta vidiyo:
Biko chọta n'okpuru ebe a, vidio vidio YouTube maka profaịlụ a. Obiọma Gaa na Ndenye aha anyị Youtube ọwa maka vidiyo ndị ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ anyị Idrissa Gueye Childhood akụkọ na akwụkwọ akụkọ ụgha. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Wout Weghorst Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Richard Arnold Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya